Xaalada Soomaaliya - BBC News Somali
22 Febraayo 2012
Colaada Soomaliya: Maxay tahay sababta loogu baahanyahay taageerada Caalamka?
Dowladda Britain ayaa rajeneysa in shir ay marti gelinayso 23-ka Febraayo in uu noqdo kii ugu dambeyntii nabad u keena Soomalia, oo labaatankii sanno ee ugu dambeeyey aanan arag wax aan ka hayan dhibaato iyo dagaalo.
Si la mid ah waddamada kale ee reer galbeedka Britain waxay dhimaysaa kharashaadkeeda si ay isaga bixiso deymaha lagu leeyahay, laakiinse meelaha aanan lacagaha aanan laga jarin waxaa ka mid ah gargaarka dibedaha ay siiso.
Haddaba iyadoo ay socdaan barnaamijo gunti-giijis ah, maxay tahay sababta ay dowladda Britain ay u gelinayso lacagaheeda oo ay isu dayeyso in ay nabad ka dhaliso waddan si badan loo sheegay in uu yahay waddan fashilmay, oo horay ay u soo mareen 15 jeer oo isku day ah in la joojiyo colaada?
Dolwddu waxay ku doodaysaa in sababtu tahay danta Britain.
Kooxda islaamiga ah ee soomaliya ee Al-Shabaab dhowaan waxay shaacisay in ay ku biirtay ururka Al-Qaacida, horayna waxaa u jiray warar lagu kalsoonyahay oo muujinaya inay jiraan dagaalyahano shisheeye oo tababar militari ku qaadanaya Soomalia qeybaha ay gacanta ku hayaan Islaamiyiinta.
Soomaliya waxay ka mid tahay labada dal - waddanka kale waa Yemen- ee lagu xusay in yihiin " kuwo walaac weyn abuuraya" website-ka hay'aada sirdoonka ee Britain ee MI5, iyadoo wasiirka gargaarka caalamiga ah Andrew Mitchel uu dhowaan u sheegay wargeyska the Sun "Ma jiro waddan uga badan dunida Britain, dadka haysta baasaboorka britain ee ka dagaalamaya Soomalia"
Waddamada deriska la ah Soomaliya ee Kenya iyo Ethiopia oo labaduba ay ku hoos noolyihiin dad soomali ah ayaa iyaguna ka baqaya in al-shabaab ay ku qaado dhulkooda weeraro argigixisa ah, siddii ka dhacdayba Uganda 2010-kii.
Kenya iyo Ethiopia waxay labaduba dhowaan ciidan u direen Soomaliya si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab.
Iyadoo aanay u muuqan in waddamada reer galbeedka in ay sidaas oo kale ciidan ugu diraan Soomalia, ayaa khubarada waxay sheegyaan in ay gacan ka siinayaan waddamada siddii ay isugu dubi lahayeen weerarada ka dhanka ah al-Shabaab, waxay sidoo kale saacidayaan ciidmada nabad ilaalinta ee midowga afrika iyo dowladda ku meel gaarka, oo dhowaan un al-Shabaab kala wareegay caasimada, Muqdisho.
Britain waxay rajeneysaa in ay ka faa'ideysato jabka gaaray Shabaab si ay Soomalia ugu sameyso dowlad gacanta ku dhigto dhamaan dalka kadib markii albaabada u laabto xeryaha lagu tababarayo argigixisada.
Xilli ay dagaalo iyo dhibaatooyin kale ka jiraan Somalia, mid ka mid ah qaaabka nolol wanaagsan loogu sameysto Somalia waa burcad badeedka, kuwaas oo afduuba maraakiibta iyo shaqaalaha saaran. Goobaha la geeyo maraakiibta iyo shaqaalaha saaran waxaa u badan degaanada Xarardheere iyo Eyl, lamana sii daayo ilaa ay ka bixiyaan malaayiin dollar oo madax furasho ah.
Maraakiib waaweyn oo ay ku jiraan kuwa shidaalka qaada iyo mid sidey taangiyada dagaalka ayay burcad badeedka Soomaaliyeed ku weerareen badweynta India.
Ciidamada badda ee dalalka caalamka ayaa mushkiladan kaga jawaabey inay diraan maraakiib dagaal oo gaaf wareega xeebaha Somalia.
Talaabadani waxay dhalisey in tirada maraakiibta la afduubto ay hoos u dhacdo, balse dhanka kale weerarada ayaa noqdey kuwo waxyeelo geysta. Burcadda ayaa u dhaqaaqey meelo aad u fog fog si ay uga fogaadaan maraakiibta dagaalka ee hawlgalada wada.
Weerarada burcad badeedka ayaa lagu qiyaasaa inay khasaare dhan balaayiin dollar oo lagu bixiyo madax furasho u geystaan shirkadaha, iyo weliba lacagta lagu bixiyo ceymiska iyo khidmadaha rarista maraakiibta oo sare u kacey.
Xaqiiqdii, khidmadahan dheeriga ah waxay inta badan saameeyeen sare u kaca ku yimid badeecadaha kala duwan. Walow hawlgalada ciidan ee la dagaalanka burcad badeedka ay hoos u dhigeen tirada weerarada burcad badeedka, hadana xalka keliya ee kama dambeysta ah waxaa weeyaan in nabad laga dhaliyo Somalia, sharciga iyo kala dambeyntana lagu soo celiyo.
Tanina waa sababta dowladda Britain ay ugu maleyneyso inay muhiim tahay in nabad laga dhaliyo Somalia.
In shirku uu guuleysto iyo in kale iyana waa arin kale.